Muran Ka Taagan Cidii Lahayd Markii Hore Calanka Buluugga Ah Ee Soomaaliya Iyo Dacwad Sharci Oo Laga Gudbiyay + Warbixin Qoraal Ah Oo Dheer Oo Laga Sameeyay Arintan. | Baarcadeeye
Muran Ka Taagan Cidii Lahayd Markii Hore Calanka Buluugga Ah Ee Soomaaliya Iyo Dacwad Sharci Oo Laga Gudbiyay + Warbixin Qoraal Ah Oo Dheer Oo Laga Sameeyay Arintan.
Florida(Baarcadeeye) – Calanka Buluugga ah ee Soomaaliya ee Xidigta dhexda ku leh ayaa la sheegay inay markii hore ay lahaayeen Wadamo kale islamarkaana waxa hadda la soo sheegayaa inuu muran sharci ka taagan yahay.
Qoraal dheer oo laga sameeyay dacwadan iyo sida ay wax yihiin oo wargeyska Foore soo gaadhay ayaa waxa lagu yidhi sidan “Calanka Buluugga ah ee Dawladda Federaalka Somalia astaanta ka dhigato waa calan hore u jiray oo loo yaqaanay “Bonnie Blue Flag”. Waa calan uu lahaa Confederate States of America bilowgii dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Maraykanka . Bonnie Blue Flag wuxuu ka koobnaa hal xiddig oo cad oo ku taalla aag buluug ah. Isticmaalkii ugu horeeyay ee calanka Bonnie Blue Flag wuxuu ahaa 1810 markii loo isticmaalay inuu metalo Jamhuuriyadda West Florida oo ka koobnayd Alabama, Mississippi iyo East Louisiana, oo ka soo horjeestay xukunkii Isbaanishka “ Spanish Rule”.
Waxa qoraalkaasi lagu sii yidhi“Kacdoonkaas waxa lagu afduubay Guddoomiyahii Gobolka Mr. Baton Rouge. Madax-bannaanida Jamhuuriyadda West Florida ayaa socotay muddo saddex bilood ah waxaana lasoo afjaray markii la sii daayay dhulkii lagu muransanaa ee dhul-beereedka ahaa oo lagu kala iibsaday heshiiskii Louisiana Purchase. Taariikhdu markay ahayd 1836 waxa calanka “ Bonnie Blue Flag” mid la mid ah oo loo bixiyay “ Barnet Flag “ samaystay Congress of the Republic of Texas. 1861 waxa Bonnie Blue Flag astaan rasmi ah ka dhigtay Confederate States of America. Sannadkii 2007 mid ka mid ah lixdii calan oo ka hadhay “ Bonnie Blue Flags “ waxa lagu kala iibsaday xaraash ka dhacay Texas qiimo dhan $ 47,800 “ Gunaanad: Hadaba, akhhristayaal, waxaan halkan idiinku soo gudbinyaa Calankii “ Bonnie Blue Flag “ asagoo Sawir iyo Muqaalba ah “ Photo & Video Clip “ . Waxa cad in Calanka Dawladda Federaalka Somalia ee leh Xiddiga iyo Aaga Bluega uu yahay Calankii Bonnie Blue Flag oo ay u kala danbeeyeen Republic of West Florida ,1810 iyo Confederate States of America 1861 “.
Ugu waxa qoraalkan lagu yidhi “Waxa been noqotay sheekada odhanaysa Calanka Somalia waxa hindisay nin lagu magacaabo Mohamed Awale Liban, 12th October,1954 . Waxaan xidhiidh la sameeyay Hay’addo masuul ka ah Taariikhda iyo Dhaqanka Maraykanka si Calankaa tuugada ah ee Somalia isticmaasho loo laa-laabo . Denbigaas waxa dersaaya oo gacanta ku haya Lawyaro ku xeel dheer “ Copy Right Piracy & Infringement” . Waxaan ka codsanyaa qof wal oo Somalilander ahi inuu faafiyo Video Kilpka iyo Sawirka ku lifaaqan maqaalkan oo si fiican u qeexaaya taariikhda calanka ka kooban Xiddiga Cad ee ku yaalla aaga bluuga ah”.